Fahatsiarovana mpanakanto :: « Olona mahavariana sady mpampihavana i Dadah », hoy ireo namany • AoRaha
Fahatsiarovana mpanakanto « Olona mahavariana sady mpampihavana i Dadah », hoy ireo namany
Tampoka loatra ka saika tsy nampino ny maro. Tapa-bolana monja taorian’ny nahafatesan’i Fafah, raha tsy mbola nanolatra akory ny fery, dia nodimandry Andrianabela Rakotobe na i Dadah, tamin’ny alahady 3 novambra lasa teo. Teo amin’ny faha-65 taonany no nandao ity tontolo hita maso ity izy. Mpikambana sady anisan’ny nanorina ny tarika Mahaleo tamin’ny fiandohan’ny taona 1970 ny lehilahy. Sady namoron-kira no mpihira ary mpitendry gitara ihany koa i Dadah. Amin’ny lafiny finoana, sady diakona no mpitendry zavamaneno, mpikambana ao amin’ny antoko mpihira AMA, ao amin’ny FJKM Analakely izy. Raha tsiahivina, kofona teo am-pisakafoanana i Dadah, ka nitarika fahatapahana lalan-dra izany ary niafara tamin’ny fahafatesany, tany Antsirabe. Vesaran’ny alahelo ireo nifanerasera taminy. Mampatsiahy sy mitantara ireo nampiavaka an’ity andrarezin’ny famoronan-kira ity, fony fahavelony, i Bekoto, namany sy i Jean Ba, mpiandraikitra ny tahirin’ny tarika Mahaleo.
“Olona mahatalanjona tsy manan-tsahala i Dadah”, hoy i Bekoto. “Voahangy tsy fahita firy i Dadah. Mihira sady mamoron-kira sy mitendry izy. Poeta feno mahafehy ny literatiora ihany koa izy raha tarafina amin’ ireo hira nosoratany. Ankoatra ny fihirana dia mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny fandidiana ny loha sy ny hazondamosina, izay fantatra amin’ny hoe: «Neuro Traumatologue». Ny tena mahavariana ahy aminy dia ny fahaizany mandrindra ireo rehetra ireo eo amin’ny fiainany. Tsy maro ny toa azy”, hoy ihany izy.
Mamboraka ny fahatsiarovana nanamarika azy tamin’ny fahavelon’i Dadah ihany koa ity mpanakanto namany ao amin’ny tarika Mahaleo ity. “Olona mandala ny firaisankina raha i Dadah. Mahasarotiny azy ny fikitikihana ny fianakaviana sy ireo namany ao amin’ny tarika Mahaleo. Olona tsy lany tsiky kosa izy. Feno vazivazy sy hafaliana foana ny zavatra ataonay rehetra niaraka tamin’i Dadah”, raha ny fanazavany ihany.
“Tso-po sady mpampiombona no mpanome tsikitsiky i Dadah”, hoy indray Jean Bà, mpisahana ny tahirin’ny tarika Mahaleo. “Maro ny faha-tsiarovana tsara navelany. Olon’ny fiarahamonina izy. Teny tsy afaka am-bavany ny hoe: “fa ahoana io e?” rehefa misy tsy fihetezan-javatra. Te hanampy anao i Dadah, amin’izay fotoana izay. Tsy mba fombany ny mandà raha miangavy fanampiana any aminy ianao. Anisan’ny toetra mampiavaka azy koa ny famadihana ny hatezerana na disadisa ho lasa tsiky mampiray donak’afo ny rehetra”, hoy hatrany i Jean Bà.
Anisan’ny olona nizaran’i Dadah sombiny tamin’ny tantaram-piainany ity mpindraikitra ny tahirin’ny tarika Mahaleo ity. “Rehefa manao fitetezam-paritra miaraka amin’ny tarika Mahaleo aho dia mazàna no mampahafantatra tantara kely amiko foana i Dadah. Anisan’ny tantaran-dry zalahy tsy mety adinoko sady mahafinaritra ny fanaovan-dry zareo “tarzan tarzan”, rehefa miserana amin’ny hazo iray maniry amin’ny lalany mankany an-tsekoly. I Dadah mihitsy no mpitarika azy ireo tamin’ izany fotoana izany, araka ny fintantarany”, hoy i Jean Bà mampahatsiahy ny fotoana nifampizaran’i Dadah tamin’ireo namany.
Fandalovana etsy Mahamasina
Amin’ny maha andrarezina an’i Dadah, tsy vitsy ny mangataka ny hanome voninahitra sy hanao veloma farany azy. Anio no hanatontosana izany, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina Mahamasina, araka ny voalazan’ny fianakaviany.
Famangiana sy fanomezam-boninahitra ny tolakandro. Hotontosaina amin’ny alina manontolo kosa ny fiaretan-tory an-kira. Hoentina ao amin’ny fiangonana Fjkm Katedraly Analakely indray ny vatana mangatsi-akan’i Dadah, rahampitso amin’ny 9 ora maraina. Any Betafo Antsirabe kosa no hanaovana ny fandevenana.
Entana ilaina andavanandro Be mpiandry ny tsena mora eny amin’ny fokontany
Oniversitem-panjakana :: Mety hihemotra ny fidiran’ny mpianatra amin’ny taona 2020
Fanadiovan’ny CSM :: Hisy mpitsara valo hiakatra Filankevitry ny fitsipi-pifehezana